Mpanamboatra sy mpamatsy volavolan-tsolika PVC - orinasa mpamokatra birao vita amin'ny kitapo vita amin'ny China
5mm celuka PVC foam board dia karazana PVC Foam Board, izay novokarin'ny fizotran'ny celuka ary namboarina tamin'ny alàlan'ny sehatra calibration. Ny tabilao Celuka PVC dia manana tampon-keraky matt, mahatonga ny ravina ho matanjaka kokoa, mateza kokoa ary maharitra kokoa noho izany.
8mm foam board pvc dia famaritana ny solaitrabe pvc foam board, izay an'ny PVC foam board ihany koa. Raiso ny polyvinyl chloride ho toy ny akora fototra, ampio mpandrendrika foama, mpiambina lelafo ary mpiasan'ny anti-antitra ary makà fitaovana manokana amin'ny famolavolana extrusion. Ny loko iraisana dia fotsy sy mainty.
Taratasy PVC 10mm
Manana orinasa mahaleo tena izahay, izay mahatonga anay ho matihanina amin'ny famokarana solaitrabe.
12mm nanitatra taratasy busa busa PVC
Ny solaitrabe fanitarana PVC dia takelaka maivana sy hentitra izay ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany ao anatin'izany ny famantarana sy ny fampisehoana, ny trano fisehosehoana, ny fametrahana sary, ny endrika anatiny, ny thermoforming, ny prototypes, ny fanaovana maodely ary maro hafa.
18mm nitarina birao PVC
Ny solaitrabe PVC nivelatra 18mm dia nantsoina koa hoe birao fotsy vita amin'ny fotsy fotsy sy fanaka vita amin'ny foam-baravarankely, iray amin'ny tabilao vita amin'ny foam-baravarankely na takelaka vita amin'ny PVC.
Tabilao celuka 25mm
Ny tabilao misy satroka 25mm dia an'ny tabilao celuka, ao amin'ny tabilao matevina 1-30 mm an'ny an'ny board matevina, noho izany ity takelaka matevina ity dia mety amin'ny fanaka, fananganana, haingon-trano ary hetsika ivelan'ny trano.
20mm fanaka vita amin'ny boaty PVC
pvc celuka foam board dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanaka, indostrian'ny dokambarotra ary ny fampiharana anatiny sy ivelany.
18mm ravin-kazo PVC
Doka: fanontana amin'ny labiera landy, sary sokitra, tabilao fampirantiana, boaty jiro
Fofon-trano: haingon-trano sy ivelany, haingon-trano, fanasarahana ny trano
Fomba fanaka: fanaka ao anaty na birao, kichen ary trano fidiovana
Famokarana fiara sy sambo, ambongony, sambo ary fiaramanidina.
Famokarana indostrialy: tetik'asa antisepsis sy fiarovana ny tontolo iainana, vata fampangatsiahana, ampahany mafana.
tabilao PVC foamex avo lenta
Kitapo vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo dia karazana fitaovana mitambatra vaovao izay novolavolaina tato anatin'ny taona vitsivitsy tao an-trano sy tany ivelany。
Mihoatra ny 35% - 70% ny lafarinina hazo, sakam-bary, mololo ary fantsom-pambolena fako hafa no mifangaro amin'ny akora hazo vaovao, ary avy eo esorina, nohosorana, nohosorana tsindrona ary teknolojia fanodinana plastika hafa ampiasaina hamokarana takelaka na mombamomba. Ampiasaina amin'ny fitaovana fananganana, fanaka, fonosana lozisialy ary indostria hafa. Antsoina hoe solaitrabe vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo any ivelany izy io fa ny plastika sy ny vovo-kazo dia afangaro amin'ny ampahany iray ary avy eo noforonin'ny extrusion mafana.
Birao mainty PVC
PVC foam board dia fitaovana henjana nefa maivana ampiasaina matetika amin'ny fampisehoana POP, signage, tabilao fampisehoana ary fampiharana tsy mitondra enta-mavesatra. Noho ny firafitry ny sela tsy miovaova, izy io dia substrate tsara ho an'ny fanontana nomerika, fanontana amin'ny efijery, sary hosodoko, laminaty ary litera vinyl.
birao fotsy fotsy vita amin'ny PVC
Ny tabilao fotsy vita amin'ny fotsy fotsy dia kalitao avo lenta, takelaka / taratasy vita amin'ny vovoka PVC tena be mpampiasa. Hita amin'ny fotsy izy io, izay malaza indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, vita amin'ny matte sy glossy amin'ny habeny voafantina. Izy io dia manana fanoherana UV tsara ety ivelany.